तोकेको मूल्य पाएनन् किसानले- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
तोकेको मूल्य पाएनन् किसानले
(धनगढी) — प्रदेश सरकारले धानको मूल्य निर्धारण गरेको भए पनि किसानहरूले भने तोकिएको मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन् । कात्तिक पहिलो साता सरकारले धानको मूल्य निर्धारण गरेको थियो ।
मोटा धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ५ सय ३२ रुपैयाँ ८० पैसा र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ १६ पैसा निर्धारण गरिएको छ । गत वर्ष मोटा धानको प्रतिक्विन्टल २ हजार २ सय ३१ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल २ हजार ४ सय ६० तोकिएको थियो । सरकारले यस वर्ष प्रतिक्विन्टलमा २ सय बढाएको छ । किसानहरूले भने प्रतिक्विन्टल २ हजारमै बेच्नुपरेको बताएका छन् ।
‘सरकारले मूल्य निर्धारण गरेर के गर्नु ? तोकिएको मूल्य पाइँदैन,’ धनगढी राजपुरका भानु प्रताप रानाले भने, ‘सरकारले मूल्य निर्धारण गर्दैमा हामीलाई फाइदा हुँदैन ।’ सरकारले वर्षेनी ब्यापार, ब्यवसाय र रोजगारीका क्षेत्रमा ह्वात्तै धेरै तलब र मूल्य बढाउने गरेको भएपनि कृषि उपजको मूल्य निकै कम बृद्धि गर्ने गरेको उनले बताए । ‘किसानहरू कत्ति धेरै लगानी गरेर खेती गर्छन्, भित्र्याउँछन् । तर, कहिलै पनि उत्पादनको न्यायोचित मूल्य पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘ढिलोगरि मूल्य निर्धारण गरेको सरकारले तोकेको मूल्य पनि लागु गराउन नसक्दा किसान हरेक वर्ष हतोत्साहित हुने अवस्था छ ।’
सरकारले किसानहरूको परिश्रमअनुसार प्रतिफल दिने योजना ल्याउन नसकेको धनगढी मट्यारीका किसान दिनेश रानाले बताए । उनले सरकारको यहि मूल्य कार्यान्वयनको परिपाटिका कारण वर्षेनी किसानहरू कृषि पेशाबाट पलायन भइरहेको बताए । ‘सरकारले हरेक वर्ष ढिलो गरी मूल्यनिर्धारण गर्दा किसानहरू उत्साहित बन्छौं । तर, किसानले बढेअनुसारको मूल्य भने कहिल्यै पाउँदैनन् ।’
किसानहरू २ हजार देखि २ हजार ३ सयसम्ममा प्रतिक्विन्टलमा धान बेच्न बाध्य रहेको बताउँछन् । कैलाली जोशीपुरका रामचन्द्र चौधरीले भने, ‘सरकारले त मूल्य तोकेको भनेको सुनेको थिए । तर, त्यो मूल्य हामी किसानले पाएकै छैनौं ।’ व्यापारीहरूले सस्तोमा मात्रै धान खरिद गरिरहेको उनले बताए । खेती लगाउने बेला लागेको कर्ज धान बेचेरै तिर्नुपर्ने भएकाले सस्तोमा बेच्नु परेको उनले बताए ।
काँटापिच्छे व्यापारीहरूले धानको मूल्य फरक तोकेको धनगढी जाँईका राधेश्याम रानाले बताए । ‘सरकारले अनुदानमा दिने मलखाद पाइदैन । महँंगोमा भएपनि अन्तबाट खरिद गरेर जसोतसो खेती रोप्छौं । लगानी पनि निकाल्न समस्या हुन्छ’ उनले भने ‘सरकारले अन्य निकायका ब्यक्तिहरूका समस्या सहजै समाधान गरेपनि किसानको पीडा कहिल्यै महसुस नगर्ने भयो ।’
सरकारले तोकेकै मूल्य किसानहरूलाई दिँदा आफु मर्कामा परिने व्यापारीहरूको तर्क छ । राज श्री फुड इन्डष्ट्रिज कैलालीका म्यानेजर मनोज अग्रवाल सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘धानको मूल्य निर्धारण गरेर मात्र के गर्नु ? चामलको मूल्य बढेको छैन् । चामल सस्तोमा बेच्नुपर्छ । कि त चामलको मूल्य पनि बढाउनु पर्‍यो । तब मात्रै किसानलाई सरकारले तोकेको धानको मूल्य दिन सकिन्छ ।’
सरकारले मूल्य निर्धारण गरेर प्रत्येक अञ्चलमा रहेका खाद्य संस्थानहरूका काँटा लगाएर किसानबाट धान खरिद गर्नु पर्दछ । संस्थानले अहिलेसम्म धान खरिद गर्न सुरु गरेको छैन् । खाद्य संस्थानबाट नाम परिवर्तन भएर बनेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड सरकारले मूल्य निर्धारण गरेको भएपनि धान खरिदका लागि खबर नआएको जनाएको छ । उक्त कार्यालयको धनगढीका जिन्सी अधिकृत धर्मराज पन्तले सरकारले धान खरिदका लागि आदेश नदिएकोले कार्यालयमा प्रकृया अघि नबढेको बताए । ‘हामीहरूको केहि पनि कमजोरी छैन् । सरकारले नै धान खरिद गर्न भनेपछि मात्रै काम अघि बढाउँछौं’ उनले भने ‘अझै केहि समय लाग्ला जस्तो छ ।’
प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ ०९:३५
उपनिर्वाचनको तयारी तीव्र
बैतडी — जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले उपचुनावको तयारी तीव्र बनाएको छ । जिल्लामा ३ स्थानीय तहका ३ वडामा चुनाव हुँदै छ । सुर्नया गाउँपालिका १, दोगडाकेदार गाउँपालिका ४ र पुरचौडी नगरपालिकामा ४ मा वडाध्यक्षका लागि चुनाव हुन लागेको हो ।
तयारीका क्रममा ३ दिनअघि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेर निर्वाचन अधिकृतहरू पनि तोकिसकिएको कार्यालयले जनाएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सुर्नया गाउँपालिका १ को सत्बाँझमा रहेको डिभिजन वन कार्यालयमा स्थापना गरिएको छ । यस्तै दोगडाकेदारको ४ र पुरचौर्डीको ४ नम्बर वडामा कार्यालय स्थापना गरिसकिएको छ । सुर्नयाका लागि जिल्ला अदालत बैतडीका न्यायधिस ईश्वरीप्रसाद भण्डारी पुरचौर्डी ४ मा उच्च अदालत कञ्चनपुर इजलास शाखाका रजिस्ट्रार टेकराज जोशी र दोगडाकेदार ४ मा उच्च अदालत डोटीका सह–रजिस्ट्रार टेकबहादुर थापालाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ । सम्बन्धित अधिकृतहरू तोकिएका ठाउँमा पुगिसकेका छन् ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले उपनिर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरूको विवरण विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट माग्दै तयार पार्ने काम गरिरहेको जनाएको छ । १ वडामा २/२ जना मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता खटाउने तयारी गरिएको शिक्षा विकास तथा समन्यव इकाई कार्यालयलाई भनेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी माधवप्रसाद फुयाँलले बताए । शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई मतदाता शिक्षामा परिचालन गर्ने तयारी भएको उनले जानकारी दिए । मंसिर ५ देखि एक सातासम्म उनीहरू सम्बन्धित वडामा पुग्ने फुयाँलले बताए । सुर्नया गाउँपालिकाको गाविस भवन गुरकेल्ली, पुरचौडी नगरपालिकाको महादेव मावि शिबाव र पहरोल मावि बागामा मतदान केन्द्र तोकिएको छ । यस्तै दोगडाकेदार गाउँपालिकाको केदार माध्यमिक विद्यालय पीपलकोट र हुनैनाथ आधारभूत विद्यालय कपिन्नामा मतदान केन्द्र तोकिएको छ ।
प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ ०९:३४